Ipharadesi elinokuthula endaweni yaseMontseny - I-Airbnb
Ipharadesi elinokuthula endaweni yaseMontseny
Gualba, Catalunya, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Karl
Indlu encane enomuzwa wesikhala esizungezwe imvelo: ingadi enkulu egcwele izimbali nezihlahla, amanzi agelezayo, indawo yokubhukuda, amathala angu-2 ukuze ujabulele isidlo sasekuseni nelanga lasekuseni, isidlo sasemini esinomunyu esibheke engadini kanye ne-cocktail yakusihlwa ukugubha ukushona kwelanga. . Kukhona ikamelo lokulala elikhulu, igumbi elinombhede wokulala, umbhede osofa endlini yokuphumula.
Indawo enhle yokuzilibazisa, ukuphumula noma ukusekela iholide lomsebenzi obanzi: Ngaphansi kwemizuzu engama-60 ukuya e-Barcelona, amabhishi e-Costa Brava, i-Waterworld, uhambo lwezintaba.
Indlu encane enomuzwa wesikhala esizungezwe imvelo: ingadi enkulu egcwele izimbali nezihlahla, amanzi agelezayo, indawo yokubhukuda, amathala angu-2 ukuze ujabulele isidlo sasekuseni nelanga lasekuseni, isidlo sasemini esibi esibheke engadini kanye ne-cocktail yakusihlwa ukugubha usuku. ukushona kwelanga.
Ilungele abantu abangu-1, 2 noma 3 kanye nomndeni omncane onezingane ezi-2.
Indawo enhle yokuzilibazisa, ukuphumula noma ukusekela iholide lomsebenzi obanzi: Ngaphansi kwemizuzu engama-60 ukuya e-Barcelona, amabhishi e-Costa Brava, ubumnandi be-Waterworld, uhambo lwezintaba.
Iphuli ingasetshenziswa kusukela cishe ngo-Ephreli 15 kuya ku-Septhemba 30.
4.95 · 165 okushiwo abanye
Nakuba uhambo lokuqwala izintaba kungenzeka luqale ngokoqobo kusukela emnyango - ukuba nemoto eqashiwe noma imoto yakho kuyanconywa futhi kukunikeza ukuguquguquka okukhulu.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzokwazi ukufinyelela okufanelekile:
Izitolo ezinkulu e-Sant Celoni (imizuzu eyi-10-15 ngemoto)
Usuku lwemakethe njalo ngoLwesithathu e-Sant Celoni.
I-Barcelona - imizuzu engama-50 ngemoto (imizuzu engama-60 noma ngaphezulu ngemoto nangesitimela esisuka e-Sant Celoni eseduze ukuze uvakashele ngokukhululeka)
I-Dali Museum e-Figueres ifaneleka kakhulu ukuvakashelwa.
I-Girona ne-Vic amadolobha amahle aseduze nawo afanele ukuvakashelwa.
Lonke ugu lwaseCosta Brava (ingxenye eseduze cishe nemizuzu engama-30 ukusuka e-Arenys de Mar)
Uma usufikile futhi uthole okhiye, kufanele ulindele ukushiywa ukuze ujabulele indawo sengathi ngeyakho. Indlu, amathala kanye nengadi eseduze kuvame kakhulu futhi akunakwa.
Nokho abanikazi (abakhuluma isiNgisi, isiFulentshi nesiJalimane) bahlala endlini eseduze kwenye ingxenye yengadi, okukunikeza ithuba lokubuza nganoma yiluphi usizo noma usizo ongase uludinge ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Banenja enobungane enakekelayo ukuthi akukho bahlaseli abafinyelelayo.
Inombolo yepholisi: HUTB-016534
Hlola ezinye izinketho ezise- Gualba namaphethelo